Hel '404 - Ma helin' marka isku day inaad soo dejiso
Hel '404 - Ma helin' marka isku day inaad soo dejiso sano 2 4 bilood ka hor #932
Waxaan isku dayey inaan soo dejiyo freeware at:
Marka aan ku dhufto badhanka Download waxaad isku dayday inaad halkan ka hesho:
waxaanan helayaa '404 - Ma helin'.
Maxaan sameyn karaa si aan u soo dejiyo?
Hel '404 - Ma helin' marka isku day inaad soo dejiso sano 2 4 bilood ka hor #933
Khalad 404 ayaa noqon kara dhowr sababood. Waxaad dhibaato ku qabi kartaa adeegahaaga ama Rikooo laga yaabee inaad ka shaqeyn laheyd koodaba. Waxaad lahaan kartaa isku xirnaan xaddidan. Waad yeelan kartaa xoogaa fal-gal ah. Waxaan kugula talinayaa in aad socodsiiso maltaxadaha. Waa soo dejiso bilaash ah oo waxaad helaysaa 15 maalmood oo adeeg buuxa oo bilaash ah. Waxaan isticmaalayay 4 sano, waxbana ma galaan. Markaad iskaanka iskaanka u sameyso, isku day inaad soo degsato muuqaalka mar labaad.